War Deg Deg ah Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u ansixiyay Ra’isul wasaaraha Soomaaliya!! | kowtharmedia.com
Home WARAR War Deg Deg ah Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u ansixiyay Ra’isul wasaaraha Soomaaliya!!
War Deg Deg ah Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u ansixiyay Ra’isul wasaaraha Soomaaliya!!
Mar 01, 2017WARAR
Kulanka Baarlamaanka ee Kalfadhiga 1 aad ee Barlamaanka Soomaaliya ee ay ku yeesheen xarunta golaha Shacabka ayaa ka koobnaa qodobo dhowr ah ajendihiisu, sided qodobo oo ay ugu muhiimsaneyd codka Kalsooni siinta Barlamaanka Soomaaliya, waxaana ka soo qeyb-galay madaxweynaha Soomaalyia oo Barlamaanka hor keenay Ra’iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre.
Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya, Mudane Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” ayaa furay kalankaan aan caadiga aheyn, isagoo Barlamaanka ka hor akhriyey farriinta Barlamaanka ee ku socota Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya haddii uu Codka Kasoonida ka helo Barlamaank, isagoo faah-faahiyey tallooyinka iyo marxaladdaha la wajahayo ee la doonayo in ay iskula jaan-qaadaan Xukuumadda la soo dhisi doono iyo Barlamnaanka Soomaaliya.
Previous PostDaawo: Cabdiwali Gaas oo dhaqaale ka badan midkii S.land Qaadatay, doonaya inuu ku Wareejiyo Dekedda Boosaaso MUUQAAL!! Next PostKhasaare intee le’eg ayuu geystay dabkii shalay baabi’yey qeybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha? Daawo sawirro galabta laga sooqay....